Dear Twitter, Nceda unqande obu Buphukuphuku Bulandelayo | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 7, 2009 NgeCawa, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
Yonke imihla ndiqwalasele oku kulandelayo Twitter. Ilungu ngalinye nelilandelayo landilandela lithetha into ethile. Ndakhe oku kulandelayo ngokomzimba, ngokufumana ukuthandwa ngumlandeli omnye ngexesha.
Hayi kwakhona. Ngoku kuyahlekisa… Ukulandela ngokuzenzekelayo amaza Benziwa umzuzu nomzuzu. Ndingaya kwi-Twitter namhlanje kwaye ndifumane amaqhekeza angamakhulu ambalwa anokukufumanela ngaphezulu kwabalandeli be-10,000 kwintsuku ezimbalwa. I-Twitter kufuneka ixineke phantsi kobunzima obungaqhelekanga bala manani.
Andazi ukuba yintoni enyanzela umntu ukuba aqhathe amanani ukuze afumane ii-eyeballs ezingenanto. Luhlobo luni lwe-ego ekufuneka ulwenzile ukuze wehle ngaloo ndlela? Andiqinisekanga kodwa iyandicaphukisa. Abalandeli bam abangama-5,000 6,000 babedla ngokuthetha into. Ngoku ndingaphezu kwama-XNUMX… kodwa uninzi lwabalandeli abatsha balandela ngokuzenzekelayo iifowuni.
Ezi nkqubo zokulandela ngokuzenzekelayo kufuneka zisebenze ngaphandle kwi-Twitter, ke kufanele ukuba kube lula ukuzichonga kunye nokubathintela. I-Twitter kufuneka iyenze ngoku-ingaphelelanga nje ekuzisuseni kwi-phony enamanani alandelayo, kodwa ukunciphisa uxinzelelo ekufuneka belwenzile bonke aba balandeli ukuze babe nefuthe ekusebenzeni kwe-Twitter kuthi sonke esiyayixabisayo inkonzo yabo.
Nceda u-Twitter… yenza into malunga nayo! Bonakalisa isicelo sakho.
Yintoni eyenza uMhlalutyi oMkhulu?
UMichael @ TheBloggerSource
Meyi 8, 2009 kwi-12: 29 AM
Ndisebenzisa ukulandela ngokuzenzekelayo xa ndiqala ukuqala ndaze ndabona ukuba iintlobo zabantu endandibavuma zazingengabo endifuna ukulandela. Ngoku ndikhetha kwaye ndikhethe nganye nganye. Ngoku ndiyakulandela njengoko ndijongile kwaye bendingekabikho.
Meyi 8, 2009 kwi-12: 32 AM
Ndibeke isicelo kuTwitter ukususa useto lwam lokuzenzekelayo kodwa andikamva kwakhona… Ndicinga ukuba baxakekile ngoku! Ndiyathemba ukuba baya kongeza ukhetho ukuze ndikwazi ukuzicima ngokwam. Ngoku ndiyazisola Michael!
Ndijonga nganye nganye kwaye andilandeli xa ndibona ukuba bathumela nje i-spammer okanye i-auto-following phony (bayaphakama ukusuka kubalandeli abambalwa ukuya kumawaka ngeveki).
Meyi 8, 2009 kwi-8: 36 AM
I-twitter kulawulo lwehlabathi ngoku. wonke umntu eofisini yam u-twitter ujikeleza ngalo lonke ixesha. Khange ndimisele ukulandela ngokuzenzekelayo
Meyi 8, 2009 kwi-9: 07 AM
Kuhlekisa kangakanani ukuba isibhengezo sesibhengezo phezulu kwesi sithuba senzelwe inkonzo eya kukufumanela abalandeli abangama-4,000 nge $ 12.95.
Irony? Enkosi kuGoogle!
Meyi 8, 2009 kwi-5: 35 PM
Eso sisandi sikaDoug ekhwaza osivayo! Doh!
Meyi 8, 2009 kwi-10: 27 AM
Kubonakala ngathi ngalo lonke ixesha ndongeza iposti ku-twitter ndigqibezela malunga nabalandeli abatsha abahlanu?
Meyi 8, 2009 kwi-10: 38 AM
Ndimtsha ku-twitter kodwa ndiyayibona ingxaki kunye nesiphithiphithi esi sizakubangela. Nceda ufumane inkxaso kwiphulo lam ukwenza ukuba abantu babone ukukhanya kwaye bayeke ukusebenzisa iirobhothi ezilandela iimoto, izikripthi kunye neenkonzo.
Meyi 8, 2009 kwi-5: 38 PM
Meyi 8, 2009 kwi-4: 03 PM
Ubomi bufutshane kakhulu ukuba ungaxinaniswa ngabantu abangabelaniyo ngeminqweno yakho… Ndivakalelwa kukuba abafowunelwa kufuneka babe njengebhotile "elungileyo" yeWayini ekufuneka uyikhethile kwaye ukhethe ukuba yeyiphi eyona nto uyithandayo!
Meyi 9, 2009 kwi-1: 31 AM
OMG. Enkosi ngokubhala oku. Ndinothando / ubudlelwane bokuzonda kunye ne-Twitter ngesi sizathu kanye. Izolo nje, ndikhubaze izaziso kuba bendidla ngokuchitha ixesha elininzi ndisebenzisa abalandeli abatsha (abangenanto) usuku nosuku (kwaye andinalo nelona nani liphezulu labalandeli njengabanye).
Meyi 21, 2009 kwi-10: 35 PM
Bendicinga ukuba lolu lutshintsho kuwe. Ndiyakhumbula usithi ulandela-ngokuzenzekelayo nabani na okulandelayo kwaye unomdla kubo bonke abalandeli bakho. Ukucinga ukuba yintoni eyenze ukuba utshintsho ngokubanzi kuluvo lwakho kwesi sicwangciso? Ngaba yayikukugaxeka nje?
Epreli 6, 2011 ngo-1: 09 AM
Ndiyavuma, ndicinga ukuba izixhobo ezilandelayo ngokuzenzekelayo azenzi naliphi na ixabiso lokwenyani kubalandeli nakwabalandelayo. Kubuhlungu ukubona esi sithuba siphantse sibe yiminyaka emi-2 ubudala.